Mustaf shiikh cali Dhuxuloow oo ku guulaystay aqalka hoose +sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Mustaf shiikh cali Dhuxuloow oo ku guulaystay aqalka hoose +sawirro
Waxaa saakay magaalada Cadaado ee xaurnta KMG maamulka Galmudg ka socota doorashada Xubnaha Aqalka hoose ee Baarlamaanka Federaalka, waxaana saakay la dooranayaa dhoor Xildhibaan.
Waxaa goordhaw doorasho ka dhacday hoolka Madaxtooyada Galmudug lagu doortay Xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo horey uga mid ahaa Baarlamaanka waqtigiisa dhamaaday sidoo kale Wasiiro kasoo noqday Dowladihii dalka soo maray.
Musharax Mustaf Dhuxulow ayaa ka guuleestay Musharaxii la tarmayay ee Cabdiweli Nuur Faarax kadib markii uu tanaasulay, Waxaana Xildhibaan Mustaf Dhuxulow qaab gacan taag ah ugu codeeyay 47-ergo oo goob joog ka ahaa hoolka doorashada ka socotay.
Cabdiweli Nuur Faarax ayaa sheegay in uu go’aansaday in uu ka tanaasulo tartanka , waxa uuna cadeeyay in aysan jirin cid ku qasabtay in uu tanaasulo balse isaga uu go’aansaday in uu u tanaasulo Xildhibaa Mustaf Dhuxulow.
Xildhibaan Mustaf Dhuxulow ayaa kamid ahaa Xildhibaanada ugu saameynta badan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya , waxaana Mustaf uu heestay taageerada inta badan Soomaali weyn iyo dadka uu matalo.